Iimbono ezili-12 zokwahlula intengiso yakho yomxholo | Martech Zone
Izimvo ezili-12 zokwahlula intengiso yakho yomxholo
NgeCawa, ngo-Novemba 22, 2015 NgoMgqibelo, nge-13 kaFebruwari ngo-2021 Douglas Karr
Ndiyayithanda into yokuba abafundi bethu banamathele kuthi nangona singafumani buchule bokuyila. Ukulungisa kunye nokupapasha itoni ye-infographics kunceda ukwahlula upapasho lwethu kwabanye abangaphandle-kodwa asikadanga kakhulu kunoko. Eyethu uthotho lodliwanondlebe kunye neenkokheli zentengiso ngumzamo omnye.
Uninzi lwezizathu zokuba sinamathele kumxholo wokubhaliweyo omfutshane sisiseko sokujonga ngokufanelekileyo. Sinetoni yezihloko esinokubhala ngazo kwaye hayi izixhobo ezininzi. Le infographic evela kwi-Oracle iyandikhuthaza ukuba ndifumane ubuchule ngakumbi, nangona kunjalo. I-infographic, Iingcamango ezili-12 eziMangalisayo zokuThengisa (Ezi ayizizo iZithuba zeBhlog), zibonelela ngeengcebiso ezintle zokutshintsha umxholo wakho.
Imibuzo -Bhala umxholo wakho njengemibuzo.
Twitter -Khupha umxholo kwii-chunks kwi-Twitter.
iitshathi -Ukwahlula umxholo wakho ngeetshathi ezizodwa.
Into yokuphonononga -Bonisa umthengi kwaye wabelane ngesifundo esenziwe kwimeko.
Umdlalo weComic -Bhala umxholo wakho kwisiqwengana somxholo esinokwabelana ngokulula.
Umyalezo wegama - Buza uphando ngeSMS kwaye wabelane ngeziphumo.
uthotho -Bhala uthotho lwamacandelo amaninzi ukugcina abantu bebuya.
isabelo -Khawulezisa kwaye wabelane ngomxholo kwindawo ekuyo umxholo Twilley.
udliwano Sebenzisa ifomathi yodliwanondlebe kwaye wabelane ngeempendulo kwiingcali ..
Unusual -Zama iindlela ezahlukeneyo, ii-mouseovers, kunye nefomathi yokusebenzisana ukuze ubandakanye abafundi.
uluhlu lwamagama - Bhala isikhokelo okanye uluhlu lwamagama (kwaye ugcine usesikhathini!).
Siyakuthanda nokwabelana ngeaudiyo, ividiyo, ukujonga kwangaphambili iingxelo kunye namaphepha amhlophe, kwaye-kunjalo-infographics. Zeziphi ezinye izimvo zokuthengisa umxholo ozizamile ezisebenze kakuhle? Zive ukhululekile ukuba uphawule kwaye wabelane!
tags: Zifundo ze zifundoiitshathiiziqhulo ezihlekisayoUmxholo Umxholoumxholo wokuthengisa izimvouthotho lomxholoiingcebiso zomxholouluhlu lwamagamakhokelaUdliwano-ndlebeTwilleyImibuzoseriesisabeloimiyalezo ebhaliweyoTwitterengaqhelekanga
Indawo yeFayile: Hlaziya iNkcazo yeVidiyo kunye neNkqubo yokuHlola